एन्ड, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गॉड स्विट्जरल्याण्ड (WKG)
भविष्यवाणी आफैमा एक अन्त छैन - यो एक उच्च सत्य अभिव्यक्त गर्दछ। अर्थात्, कि परमेश्वर आफैले मानवता संग आफैलाई मिलाउनुहुन्छ, परमेश्वर; उहाँले हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नुभयो भनेर; कि हामीलाई फेरि परमेश्वरको साथी बनाउँछ। यो वास्तविकता भविष्यवाणी घोषणा।
भविष्यवाणी घटनाहरूको पूर्वानुमान गर्नका लागि मात्र होइन, तर हामीलाई परमेश्वरमा पठाउन पनि अस्तित्वमा छ। यसले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँ के हुनुहुन्छ, उहाँ के गर्नुहुन्छ र उहाँ हामीबाट के आशा गर्नुहुन्छ। भविष्यवाणीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मानिसलाई परमेश्वरसँग मिलाप गर्न आग्रह गर्दछ।
पुरानो नियमको अवधिमा धेरै विशिष्ट भविष्यवाणीहरू साँचो भएका छन्, र हामी पनि आउने आशा गर्दछौं। तर सबै भविष्यवाणीहरूको साथ, ध्यान बिल्कुलै भिन्न कुरामा केन्द्रित छ: छुटकारा - पापहरूको क्षमा र येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट आएको अनन्त जीवन। भविष्यवाणीले हामीलाई देखाउँदछ कि ईतिहास ईतिहासको निर्देशक हुनुहुन्छ (दानियल :4,14:१); यसले ख्रीष्टमाथिको हाम्रो विश्वासलाई सुदृढ बनाउँछ (यूहन्ना १:14,29: २)) र हामीलाई भविष्यको लागि आशा दिन्छ (१ औं
बाइबलले ख्रीष्ट र अन्तिम न्यायको फिर्तीको घोषणा गर्दछ, यसले अनन्त दण्ड र पुरस्कार घोषणा गर्दछ। त्यसो गर्दा, उनले मानिसहरूलाई देखाउँछन् कि मुक्ति आवश्यक छ र एकै साथ मुक्तिको सुरक्षितता आउनेछ। भविष्यवाणीले हामीलाई भन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई उत्तरदायी ठहराउनुहुनेछ (यहूदा १ 14-१-15) कि उहाँ हाम्रो उद्धार होस् भन्ने चाहनुहुन्छ (२ पत्रुस 2:)) र त्यो उसले हामीलाई पहिले नै उद्धार गर्यो (१ यूहन्ना १: १-२) यसले हामीलाई सबै दुष्टतालाई पराजित गर्ने र सबै अन्याय र दुःखकष्टको अन्त हुने आश्वासन दिन्छ (१ कोरिन्थी १:1:२:15,25; प्रकाश २१:))।
बाइबलका भविष्यवाणीहरू कसरी बुझ्न सकिन्छ? केवल ठूलो सावधानीका साथ। राम्रो भविष्यवाणी "प्रशंसकहरु" झूटा भविष्यवाणी र गलत कुटिलतावाद संग सुसमाचार को बदनाम छ। भविष्यवाणीको यस्तो दुरुपयोगको कारणले कोही-कोहीले बाइबलको खिल्ली उडाउँदछन्, आफैलाई ख्रीष्टको खिल्ली उडाउँदछन्। असफल भविष्यवाणीहरूको सूची यस्तो गम्भीर चेतावनी हुनुपर्दछ कि व्यक्तिगत विश्वासले सत्यलाई ग्यारेन्टी गर्दैन। किनभने गलत अनुमानले विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ, होसियार हुनै पर्छ।
आध्यात्मिक प्रगति र इसाई जीवनको लागि गम्भीरतासाथ प्रयास गर्न हामीले सनसनीपूर्ण भविष्यवाणीहरू हुनुपर्दैन। समय र अन्य विवरणहरूको ज्ञान (यदि तिनीहरू सही भए पनि मुक्तिको ग्यारेन्टी छैन)। हाम्रोलागि ध्यान केन्द्रित ख्रीष्ट हुनुपर्दछ, भलाइ र विपक्षमा होइन, यो वा त्यो विश्वशक्तिलाई "पशु" भनेर व्याख्या गरिनुपर्दछ।
प्रतीकात्मक भाषाको उदाहरण: १ 18 औं भजन। एक काव्यात्मक रूप मा, उनले वर्णन गरे कि कसरी परमेश्वरले दाऊदलाई उसको शत्रुहरूबाट बचाउनु भयो (पद १ 1) डेभिडले यसको लागि बिभिन्न प्रतीकहरू प्रयोग गर्दछ: मृतकको क्षेत्रबाट भाग (-4--6), भूकम्प ()), आकाशमा चिन्ह लगाउनुहोस् (१०-१-10), समस्याबाट पनि एक उद्धार (16-17)। यी चीजहरू वास्तवमै भएको छैन, तर प्रतीकात्मक र कवितापूर्वक लाक्षणिक अर्थमा प्रयोग गरिन्छ निश्चित तथ्यहरू वर्णन गर्न, तिनीहरूलाई "दृश्यात्मक" बनाउन। यो भविष्यवाणी गर्छ।
यी विवादहरूले बाइबल भविष्यवाणीहरूको व्याख्या गर्ने तरिकालाई असर गर्छ। एक पाठकले शाब्दिक व्याख्यालाई प्राथमिकता दिन सक्छ, अर्कोले लाक्षणिक, र यो सही छैन कि प्रमाणित गर्न असम्भव हुन सक्छ। यसले हामीलाई ठूलो तस्बिर हेर्नको लागि बाध्य पार्छ, विवरणहरू होइन। हामी फ्रोस्टेड गिलासमार्फत हेर्छौं, एक म्याग्निफाइ। गिलास मार्फत होइन।
भविष्यवाणीका धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा ईसाई सहमति छैन। त्यसैले z z प्रबल। बी। र्याप्चर, ठूलो समस्या, सहस्राब्दी, मध्यवर्ती राज्य र नरक बिभिन्न बिचारको विषयमा। व्यक्तिगत राय यति महत्त्वपूर्ण छैन।
यद्यपि तिनीहरू ईश्वरीय योजनाको अंश हुन् र भगवानका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, यद्यपि हामीले सबै सही उत्तरहरू यहाँ पाउनु आवश्यक छैन - विशेष गरी यदि तिनीहरूले हामी र बिभिन्न तरिकाले सोच्नेहरूको बिचमा मतभेद छर्दछ भने। हाम्रो दृष्टिकोण व्यक्तिगत पोइन्टमा पोख्त हुनु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। हुनसक्छ हामी एक भविष्यवाणी भविष्यवाणी तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छैन हाम्रो लक्ष्य कहाँ छ, कसरी र कुन गतिमा हामी त्यहाँ पुग्दछौं। हामीलाई सबैभन्दा बढि चाहिने कुरा भनेको हाम्रो "यात्रा गाईड", येशू ख्रीष्टमा भरोसा राख्नु हो। उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जसले बाटो जान्नुहुन्छ, र यो बिना हामी पथभ्रष्ट हुन्छौं। हामी उहाँमा टाँसौं - उसले विवरणको ख्याल राख्छ।
यी शगुनहरू र रिजर्भेसनहरू दिमागमा राख्दै हामी अब केही आधारभूत इसाई सिद्धान्तहरू विचार गर्न चाहन्छौं जुन भविष्यसँग सम्बन्धित छ।
भविष्यको बारेमा हाम्रो शिक्षालाई निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण कुञ्जी घटनाचाहिँ ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हो। उहाँ फिर्ता आउनुहुनेछ भनेर लगभग पूर्ण सम्झौता छ।
येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई "फेरि आउनुहुनेछ" भनेर घोषणा गर्नुभयो (यूहन्ना १:14,3:१) साथै, उहाँले चेलाहरूलाई मिति गणनाको साथ आफ्नो समय खेर फाल्ने बिरूद्ध चेतावनी पनि दिनुभयो (मत्ती 24,36।।) समय नजिक छ भनेर विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई आलोचना गर्नुहुन्छ (मत्ती २:: १-१-25,1), तर ती पनि जसले लामो ढिलाइमा विश्वास गर्दछन् (मत्ती १०: १ -24,45 -२०) नैतिकता: हामी जहिले पनि तयार हुनुपर्दछ, हामी तयार हुनुपर्दछ, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो।
स्वर्गदूतहरूले ती चेलाहरूलाई भने: येशू स्वर्ग जानुभएपछि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ भन्ने कुरा निश्चित छ (प्रेरित १:)) उसले "स्वर्गबाट ​​आफ्नो आगोको ज्वालामा आफ्नो शक्तिका दूतहरूका साथ प्रकट गर्दछ" (२ थिस्सलोनिकी १: --2) पावलले यसलाई "महान् परमेश्वर र हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमाको उपस्थिति" भनेका छन् (तीतस १,।)। पत्रुसले “येशू ख्रीष्ट देखा पर्नुहुनेछ” को पनि कुरा गरे (१ पत्रुस १:;; पद १ 1 पनि हेर्नुहोस्), यूहन्नाले जस्तै (१ यूहन्ना :1:१:2,28)। त्यस्तै हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रमा: येशू “दोस्रो चोटि” “उहाँसित उद्धारको निम्ति पर्खिरहेकाहरूलाई” देखा पर्नुहुनेछ (9,28)।
त्यहाँ "चर्को आवाज", "परमेश्वरको तुरही" को चर्को स्वरमा "आदेश" को कुरा छ (२ थिस्सलोनिकी 2..4,16) दोस्रो आउने स्पष्ट हुन्छ, देख्न योग्य र श्रव्य हुन्छ, अकल्पनीय हुनेछ।
यो दुई अन्य घटनाहरूको साथ हुनेछ: पुनरुत्थान र न्याय। पावल लेख्छन् कि प्रभु आउनुहुँदा मरेकाहरू ख्रीष्टमा बौरिउठ्नेछन्, र यही समयमा जीवित विश्वासीहरूलाई हावामा खडा गरी प्रभुलाई भेट्न आउनेछन्। (२ थिस्सलोनिकी १: --2) "किनभने तुरही बज्नेछ," र पावलले मरेकाहरूको पुनरुत्थान हुनेछ र हामी रूपान्तरित हुनेछौं "। (२ कोरिन्थी १ 1:१:15,52)। हामी परिवर्तनको क्रममा छौं - हामी "गौरवशाली", शक्तिशाली, अविनाशी, अमर र आध्यात्मिक छौं (V. 42-44)
मत्ती २:24,31:१ ले यसलाई अर्कै दृष्टिकोणबाट वर्णन गरेको देखिन्छ: "र [ख्रीष्टले] चहकिलो तुरहीको साथ आफ्ना दूतहरू पठाउनुहुनेछ, र तिनीहरूले छानिएका मानिसहरूलाई चारवटा बतासबाट आकाशको एक कुनादेखि अर्को छेउमा भेला गराउनेछन्।" सामा येशू भन्नुहुन्छ कि युगको अन्त्यमा उसले "आफ्ना दूतहरू पठाउँनेछ र तिनीहरूले उसको राज्यबाट सबै थोक एकत्रित गर्नेछन् जुन खेर फाल्ने र गलत हो" (मत्ती १०: १ -13,40 -२०) "किनभने यस्तो हुनेछ कि जब मानिसका पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना दूतहरूसँग आउँदछन्, र तब उसले सबैलाई उसको काम अनुसार इनाम दिनेछ"। (मत्ती 16,27।।) Servant of। The। The to।।। Servant। Servant servant the the the the servant विश्वासी नोकरको दृष्टान्तमा प्रभु फर्किन्छ (मत्ती २:: -24,45 51-१) र तिनीहरूलाई सुम्पिएको एन्ट्रेन्टहरूको दृष्टान्तमा (मत्ती २:: १-25,14--30०) न्याय पनि।
जब प्रभु आउनु हुन्छ, पावलले लेख्दछन्, "उसले अन्धकारमा लुकेको कुरा पनि प्रकाशमा ल्याउँदछ" र हृदयको अथक प्रयासलाई प्रकट गर्दछ। तब सबैले परमेश्वरबाट प्रशंसा पाउनेछन् ” (२ कोरिन्थी १ 1:१:4,5)। निस्सन्देह, भगवानले सबै मानिसहरूलाई पहिले नै चिन्नुभएको छ, र त्यसैले ख्रीष्टको आगमनभन्दा धेरै अघि न्याय भयो। तर त्यसपछि यो पहिलो पटक "सार्वजनिक" गरिनेछ र सबैलाई घोषणा गरियो। हामीलाई नयाँ जीवन दिइयो र हामीलाई पुरस्कृत गरियो भन्ने तथ्यलाई ठूलो प्रोत्साहन दिइएको छ। “पुनरुत्थान अध्याय” को अन्तमा पावल यसो भन्छन्: “तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमार्फत हामीलाई विजयी तुल्याउने परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्! यसैले मेरा प्रिय भाइहरू हो, दृढ होओ, दृढ होओ र प्रभुको काममा सधैं बढिरह, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको काम व्यर्थ हुँदैन। ” (१ कोरिन्थी १२: -1-।)
चासो जगाउन, भविष्यवाणी शिक्षकहरू सोध्न मन पराउँछन्: "के हामी अन्तिम दिनहरूमा बाँचिरहेका छौं?" सही उत्तर "हो" हो - र यो २००० बर्षदेखि सहि छ। पत्रुसले विगतका केही दिनहरूको बारेमा एउटा भविष्यवाणी उद्धृत गरे र आफ्नै समयमा लागू गर्दछन् (प्रेरित २: १-2,16-१-17), हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रका लेखकले जस्तै (हिब्रू १०: २)) अन्तिम दिनहरू केहि व्यक्तिले सोचे भन्दा धेरै लामो भयो। येशू दुश्मनलाई जितेर नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुभयो।
युद्ध र आवश्यकताले हजारौं बर्षदेखि मानवतालाई पिरोलेको छ। के यो कुनै नराम्रो हुनेछ? सम्भवतः त्यस पछि यो अझ राम्रो हुन सक्दछ र त्यसपछि फेरि नराम्रो। वा यो केहि मानिसहरूका लागि राम्रो र अरुको लागि खराब हुन्छ। इतिहास भर मा, "दुख सूचकांक" माथि र तल सारिरहेको छ, र यो जारी छ जस्तो छ।
तथापि, बारम्बार, केही इसाईहरू "पर्याप्त खराब थिएनन्"। तिनीहरू ठूलो संकष्ट पछि लगभग तिर्खाएका छन्, संसारमा अबसम्म सबैभन्दा डरलाग्दो आपतकालिन समय भनेर वर्णन गरिएको छ (मत्ती 24,21।।) तिनीहरू एन्टिक्राईष्ट, "पशु", "पापको मानिस" र परमेश्वरका अन्य शत्रुहरु द्वारा मोहित छन्। हरेक डरलाग्दो घटनाहरूमा तिनीहरू नियमित तवरले एउटा संकेत देख्दछन् कि ख्रीष्ट चाँडै आउनुहुनेछ।
यो सत्य हो कि येशूले भय terrible्कर कष्टको समयको भविष्यवाणी गर्नुभयो (मत्ती २:24,21:२१), तर उनले भनेका धेरैजसो घटनाहरू of० मा यरूशलेमको घेराबन्दीको समयमा सम्पन्न भएको थियो। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यस्ता चीजहरूको बारेमा चेताउनी दिनुहुन्छ जुन उनीहरूले अझै अनुभव गर्नुपर्दछ; उदाहरण को लागी ख) कि यहूदियाका मानिसहरू पहाडहरूतिर भाग्नु आवश्यक थियो (V. 16)
हाम्रा इसाई कर्तव्यों उस्तै रहेन, चाहे स whether्कष्ट नजिक छ वा टाढा छ - वा यो शुरू भैसक्यो। भविष्यको बारेमा अनुमानले हामीलाई अधिक ख्रिष्टको जस्तो बन्न मद्दत गर्दैन, र यदि यो मानिसहरूलाई पश्चात्ताप गर्न आग्रह गर्न एक लाभको रूपमा प्रयोग गरियो भने, यसको दुरुपयोग हुनेछ। जसले समस्याको बारेमा अनुमान लगाउँछन् उनीहरूले आफ्नो समयको राम्रोसँग प्रयोग गरिरहेका छैनन्।
प्रकाश २० मा ख्रीष्ट र सन्तहरूको एक हजार वर्षीय शासनको बयान गरिएको छ। केही इसाईहरूले यसलाई शाब्दिक रूपमा एक राज्यको रूपमा बुझ्दछ जुन हजार वर्षसम्म रहन्छ र ख्रीष्टले उसको आगमनमा स्थापना गर्नुभयो। अरू इसाईहरूले "हजार वर्ष" लाई प्रतीकात्मक रूपमा देख्दछन्, चर्चमा ख्रीष्टको शासनको प्रतीकको रूपमा, उहाँ फर्किनु भन्दा पहिले।
यो कसरी हुनेछ - अनन्तसम्म? हामी केवल यो कुरा जान्दछौं जुन टुक्राहरूमा (१ कोरिन्थी १ 1:;; १ यूहन्ना:: २) किनकि हाम्रा सबै शब्दहरू र विचारहरू आजको संसारमा आधारित छन्। डेभिडले यो तरिका राख्दछन्: "तपाईको खुशी हुनु अघि तपाईको दाँयामा सधैंभरि खुशी र खुशी हुन्छ" (भजन .16,11..XNUMX) अनन्तकालको उत्तम अंश परमेश्वरसँग रहनुहुनेछ; उहाँ कसरी हुनहुन्छ; ऊ वास्तवमै के हो भनेर उहाँलाई हेर्न; उहाँलाई राम्ररी चिन्न र चिन्न (१ यूहन्ना :1:१:3,2)। यो हाम्रो अन्तिम लक्ष्य र ईश्वर-ईच्छा हुनुको भावना हो, र यसले हामीलाई सन्तुष्ट पार्छ र सदाको लागि आनन्द दिन्छ।
र १०,००० वर्षमा हामीअगाडि ईन्सको साथमा, हामी आज हाम्रो जीवनलाई फर्केर हेर्नेछौं र हामीले भोगेका चिन्ताहरूलाई मुस्कुरायौं र हामी मर्नेछौं जब परमेश्वरले उहाँको काम कति छिटो गर्नुभयो त्यसमा हामी छक्क पर्नेछौं। यो भर्खरै शुरू भएको थियो र त्यहाँ कुनै अन्त हुनेछैन।